အခနျး - ၂ နောကျခံတောငျ့ပွီး မရိုးဖွောငျ့သညျ့ ကြောငျးသား
အနျလငျးက စိတျပကျြလကျပကျြ ဖွဈနတေုနျးမှာပငျ စနဈ၏ နယျပယျက သူ့စိတျထဲတှငျ ရုတျခညျြးပျေါလာခဲ့သညျ။ "လကျခံသူက ထိုကျခြူကုနျးမွကွေီးသို့ ဝငျရောကျပွီးစီးကွောငျး ထောကျလှမျးမိပါသညျ။ ဘာသာစကားစနဈ စတငျထညျ့သှငျးနပွေီ ဖွဈပါသညျ။"
ထိုသညျကို မွငျတော့ အနျလငျး၏ မကျြနှာတှငျ ပြျောရှငျမှုတို့ သနျးလာခဲ့သညျ။ နောကျဆုံးတော့ ဘာသာစကား အတားအဆီးပွဿနာက ဖွရှေငျးပွီးတော့မှာပေါ့...။ သူက တှေးလိုကျသညျ။
ခတ်ေတကွာပွီးနောကျ စနဈက အခွားမကျဆခြေျ့တဈခု ပေးပို့လာသညျ။ "ဘာသာစကားစနဈ ထညျ့သှငျးခွငျး ကရြှုံးပါသညျ။ လကျခံသူက ခှေးလို နှဈကွိမျဟောငျရမညျ ဖွဈပွီး အသံကယျြလောငျမှု ၇၀ ဒကျဆီဘယျအောကျ မနညျးရပါ။" (ဒကျဆီဘယျက အသံတိုငျးတာသညျ့ အခွခေံယူနဈ ဖွဈပါတယျ)
ဘယျလိုသောကျအဖွဈအပကျြတှေ ဖွဈနတောလဲဆိုတာ ဘယျသူကမြား ပွောပွပေးနိုငျမလဲဗြာ...
ငါကဘာလို့မြား ခှေးလိုဟောငျဖို့ လိုအပျရတာတုနျး.. အဲလိုဟောငျလိုကျရငျ ဘာတှမြေား ရလာမှာတဲ့လဲ..
အနျလငျးက သူ့စိတျထဲမှနေ မရပျမနား ငိုကွှေးနတေော့သညျ။ စနဈကတော့ သောကျဖကျနညျးနညျးတောငျ မလုပျပေ။
"ဝုတျ.. ဝုတျ.." အနျလငျးက တိတျတဆိတျ ဟောငျလိုကျသညျ။ သူ့မကျြနှာတှငျ ရှကျရှံ့မှုတို့က အတိုငျးသားပငျ။
ထို့နောကျ စနဈက နောကျထပျ မကျဆခြေျ့တဈခု ပို့လာပွနျသညျ။ "လကျခံသူ၏ အသံသညျ ၂၀ ဒကျဆီဘယျသာ ရှိကွောငျး ထောကျလှမျးမိပါသညျ။ အသံအကယျြမလုံလောကျသဖွငျ့ မှတျတမျးယူဖို့ မဖွဈနိုငျပါ။"
မိနျးကလေးက အနျလငျးအား ထူးဆနျးသညျ့အကွညျ့နှငျ့ ကွညျ့လာသညျ။ အနျလငျးက အရမျးကို ထူးဆနျးသညျ့ အသံတှေ ပွုလုပျနသေညျကို ကွားလိုကျမိသညျဟု ခံစားနရေသညျ။
မိနျးမလှလေးက အနျလငျးနားမလညျသညျ့ ဘာသာစကားနှငျ့ ပွောပွနျသညျ။ သူမ၏ အကွညျ့မှာလညျး တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ ပွောငျးလဲလာနပွေီ ဖွဈသညျ။
ဟုတျသညျ။ သူမက သူ့အား ဉာဏျရညျမမီသညျ့ သူတဈယောကျလို ကွညျ့နခွေငျးဖွဈသညျ။
အနျလငျးက ထပျပွီးတော့ သညျးမခံနိုငျတော့ပေ။ ထို့ကွောငျ့ ကယျြနိုငျသမြှ ကယျြကယျြဟောငျဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။ "ဝုတျ...... ဝုတျ......."
သူ့အသံက အရမျးကယျြသှားသညျ့အတှကျ အနီးအနားရှိ ဖွတျသှားဖွတျလာ လူအမြား၏ အာရုံစူးစိုကျမှုကိုပါ ရရှိလိုကျသညျ။ ထိုသူမြားက တှဝေသေညျ့ အမူအရာမြားဖွငျ့ ကွညျ့လာကွသညျ။
အနျလငျးအရှတှေ့ငျ ရပျနသေညျ့ မိနျးကလေးမှာလညျး ရုတျတရကျဆိုသလို ထိတျလနျ့သှားသညျ။
"နငျက ရူးနတောလား.." မိနျးကလေးက အျောလိုကျသညျ။
ဟ.. ငါမြှျောလငျ့ထားသလိုပဲ အရူးလို့ အချေါခံလိုကျရတာပါလား... အနျလငျးက ခါးသကျသကျနှငျ့ ရယျမောလိုကျသညျ။
"ခဏလေး... နငျပွောတာ ငါနားလညျနိုငျပွီပေါ့..."
အနျလငျးက အသိစိတျပွနျဝငျလာပွီး ထူးခွားသညျ့ ဘာသာစကားတဈခုက သူ့နှုတျခမျးမှနေ အလိုအလြောကျ ထှကျလာခဲ့သညျ။
မိနျးကလေးက ပါးစပျကို လကျဖွငျ့အုပျလိုကျပွီး တခဈခဈရယျလိုကျသညျ။ "အာ... နငျက လူစကားပွောနိုငျတယျပေါ့.. အခုနက နငျရုတျတရကျကွီး ဟောငျနတောဆိုတော့ နငျက ခှေးမိစ်ဆာ အသှငျပွောငျးထားတာလို့ ထငျမိတော့မလို့ပဲ.."
အနျလငျးရဲ့ မကျြနှာက ရဲတကျလာတာကွောငျ့ အလငျြအမွနျပငျ ခေါငျးစဉျပွောငျးဖို့ ကွိုးစားလိုကျသညျ။ "အမျ... မင်ျဂလာပါ.. ငါ့နာမညျက အနျလငျး.. ဒီကို ပထမဆုံးအကွိမျ ရောကျလာတာပဲ.. ဒီနရောအကွောငျးလေးမြား ပွောပွပေးနိုငျမလား.."
ထိုမိနျးကလေးက အနညျးငယျ အံ့ဩသှားပွီး "ဒီနရောအကွောငျး မသိဘဲနဲ့ နငျဘယျလိုရောကျလာတာလဲ.."
"တကယျတော့ အရမျးအစှမျးထကျတဲ့ သူတဈယောကျ ငါ့ကို တညျနရော ရှပွေ့ောငျးပေးလိုကျတာ.. ဒီနရောနဲ့ ပတျသကျပွီး ငါက ဘာမှ မသိဘူးရယျ.."
"အိုး.. အဲလိုမြိုးလား.. အဲဒီ ကုနျးမွကေ ကောငျးကငျဘုံပိုငျနကျလေ.." မိနျးကလေးက ဝငျပေါကျအနောကျမှရှိတဲ့ နနျးတျောမြားကို ညှနျပွရငျး ရှငျးပွသညျ။ "အဲဒီ ဝငျပေါကျတှအေတှငျးက ပိုငျနကျက စုစညျးညီညှတျ ကငျြ့ကွံခွငျးကြောငျးတျောရဲ့ ကြောငျးဝငျးလေ.. နငျကလညျး ကြောငျးသားအသဈပဲလို့ ငါထငျတယျ.."
"ဝိုး.... နငျပွောသလိုဆို အဲဒီ ဝငျပေါကျအနောကျက အရမျးကယျြဝနျးတဲ့ နရောကွီးက ကြောငျးတျောရဲ့ ကြောငျးဝငျးပေါ့ ဟုတျလား..." အနျလငျးက အရမျးအံ့ဩသညျ့ လသေံနှငျ့ ပွောသညျ။
သူက အဝေးရှိ မရမေတှကျနိုငျအောငျ ပွနျ့ကြဲနသေညျ့ အဆောကျအဦမြားကို ကွညျ့လိုကျသညျ။ ထိုအဆောကျအဦမြားက ကယျြဝနျးသညျ့ နရောတဈခုလုံးတှငျ အဆုံးမသတျနိုငျအောငျ ရှိနသေညျ။
"အံ့ဩစရာပဲ မဟုတျလား.. ဒါနဲ့ နငျက ဒီကို ဘာလာလုပျတာလဲ.." မိနျးကလေးက စပျစပျစုစု မေးလာသညျ။
"တကယျတော့ အခုနက နငျခနျ့မှနျးလိုကျတာ မှနျတယျဟ.. ငါက ကြောငျးသားအသဈတဈယောကျပဲ.." သူကပွောနရေငျး ရှစောရှကျလေးကို ကမျးပေးလိုကျသညျ။
"အစဈအမှနျ နတျဘုရားတဈပါးရဲ့ ထောကျခံစာ...!" မိနျးကလေးက အာမဋေိတျသံပွုလိုကျသညျ။
ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲ အနျလငျးအပျေါ အမွငျအသဈတဈမြိုးနှငျ့ ကွညျ့လိုကျသညျ။
မိနျးကလေးက ခဈြစဖှယျအပွုံးလေးနှငျ့ အနျလငျးအား မိတျဆကျလာသညျ။ "မင်ျဂလာပါ.. ငါက ကြောကျနဂါး ပွညျနယျကလာတဲ့ စုရှောငျလနျ ပါ.. ငါလညျးပဲ ကြောငျးသူအသဈပါ.."
"နငျက ဒီနရောနဲ့ မရငျးနှီးဘူးဆိုတော့ ငါက နာမညျစာရငျးသှငျးဖို့ ကူညီပေးမယျ.."
စုရှောငျလနျက အနျလငျးရဲ့ အဖွကေိုတောငျ မစောငျ့တော့ဘဲ သူ့လကျကိုဆှဲပွီး ကြောငျးတျောဝငျပေါကျဆီသို့ ဆှဲချေါသှားသညျ။
အနျလငျးက အရမျးကို ပြျောရှငျသှားသညျ။ ဒီမိနျးမလှလေးက ရုတျတရကျကွီး ဘာလို့ သဘောတှေ ကောငျးလာရတာတုနျး..။
"ဒီ စုစညျးညီညှတျ ကငျြ့ကွံခွငျးကြောငျးတျောကို ကောငျးကငျဘုံပိုငျနကျက အထောကျအပံ့ပေးထားတာပဲ.. ပွီးတော့ ကိုးပွညျထောငျမှာဆိုရငျ စုစညျးညီညှတျ ကြောငျးတျောက ထိပျတနျးအဆငျ့ ကငျြ့ကွံခွငျးကြောငျးတျော ပဲလေ.. ကြောငျးတျောတဈခုလုံးက စတုရနျးကီလိုမီတာ လေးသောငျးလောကျ ကယျြတယျ.." စုရှောငျလနျလမျးလြှောကျနရေငျး အနျလငျးကို ကြောငျးတျောအကွောငျး ပွောလာသညျ။
အနျလငျး၏ အမူအရာမှာ စိတျလှုပျရှားမှု အပွညျ့နှငျ့ ဖွဈသညျ။ ကြောငျးတျော၏ ပိုငျနကျကပငျ ထိုငျဝမျကြှနျးတဈကြှနျးလုံးထကျ ကွီးမားကယျြပွနျ့နသေေးသညျ။
ကြောငျးတျောအတှငျးသို့ ဝငျရောကျပွီးသညျနှငျ့ တမူထူးခွားသညျ့ နတျဗိမာနျမြား ထကျပိုပွီး သူ့အား အံ့အားသငျ့စသေညျ့ အရာမှာ လမျးပျေါတှငျ မွငျတှနေ့ရေသညျ့ လူ မြားသာ ဖွဈသညျ။
သူတို့ဝတျဆငျထားသညျ့ အဝတျအစားမြိုးစုံသာမက သူတို့၏ အသားအရောငျမြားမှာလညျး အရောငျအသှေးစုံလှသညျ။ အနျလငျးဘေးမှ ဖွတျသှားသညျ့ အမြိုးသားတဈယောကျဆိုလြှငျ ဦးခေါငျးတှငျ ဦးမှငျနှငျ့ နောကျကြောတှငျ ခရုခှံ ရှိနသေညျကိုပါ မွငျလိုကျရသေးသညျ။
သူတို့နှငျ့ ယှဉျကွညျ့ပါက စုရှောငျလနျ၏ တာအိုဝတျစုံနှငျ့ သှငျပွငျမှာ အရိုးရှငျးဆုံးပငျ ဖွဈမညျ။
တခြို့ကြောငျးသားမြား၏ ဟိုဟိုဒီဒီ သှားလာနကွေသညျ့ ပုံစံမှာ အရမျးကို စိတျဝငျစားဖှယျ ကောငျးလှသညျ။ တဈခြို့က လဟေုနျစီးနကွေပွီး တခြို့မှာတော့ သူတို့၏ မှျောရတနာမြားကို အသုံးပွုပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျ ပြံသနျးနကွေသညျ။ ထိုနညျးလမျးအားလုံးမှာ လကျခံနိုငျဖှယျရာပငျ။
သို့ပမေဲ့လညျး အဲဒီလူတဈယောကျက လဆေငျနှာမောငျးပျေါ ဘာထိုငျလုပျနတောတုနျး။
ခငျဗြားက လဆေငျနှာမောငျးအပျေါ ထိုငျနတောကို ထားပါဦးဗြာ.. ဒါပမေဲ့ ဘာလို့မြား လနေဲ့အတူ လိုကျလညျနရေတာတုနျး...။
ထိုသညျကို မွငျတော့ အနျလငျးက မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ ကယျြလောငျစှာ အျောရယျမိတော့သညျ။
ထိုသညျကို မွငျတော့ လဆေငျနှာမောငျးပျေါတှငျ ထိုငျနသေညျ့သူမှာ အတျောလေး ဒေါသထှကျသှားပွီး သူ့အား ရယျနသေညျ့ အနျလငျးကို ဘုကွညျ့ကွညျ့လာသညျ။
လဆေငျနှာမောငျးအဆငျ့၏ ဆငျ့ကဲဖွဈစဉျတိုငျးတှငျ ထိုကဲသို့ လညျနမေညျ ဖွဈသဖွငျ့ အနျလငျးက ထိုအကွံကို ကွံ့ကွံ့ခံရမညျ ဖွဈသညျကွောငျ့ ထိုလူက အဝေးသို့ ရောကျမသှားမခငျြး ထပျမံပွီး မရယျရဲတော့ပေ။
စုရှောငျလငျက လူစုစု ရှိနသေညျ့ နရောတဈခုကို ညှနျပွလိုကျပွီး "စာရငျးသှငျးရမယျ့ နရောက အဲမှာပဲ.."
ထိုသညျက မွကှေကျလပျတဈခုဖွဈပွီး လူထောငျပေါငျးမြားစှာက ကွညျ့ရှုနကွေသညျ။
ဧရာမ ကြောကျနကျပွားတဈခပျြက လူအုပျအကွားတှငျ ရှိနပွေီး အဖွူရောငျအလငျးတနျးမြား ထုတျလှတျပေးနသေညျ။
တာအိုခန်ဓာ - အဆငျ့ ၇
အနျလငျး၏ မကျြနှာမှာ မှောငျမိုကျလာသညျ။ ဒီလို စမျးသပျစဈဆေးမှုမြိုးကို ရငျးနှီးနသေညျဟု ဘာလို့ ခံစားမိနတောလဲ။
"ဒါက စာရငျးမသှငျးခငျ ကငျြ့ကွံခွငျး အခွခေံကို စဈဆေးတာလေ.. ငါတို့က ကြောငျးလကျခံတဲ့ အသိပေးစာကို ရထားပွီးသားပမေဲ့ ငါတို့ရဲ့ ကငျြ့ကွံခွငျး အခွခေံအလိုကျ တကျရမယျ့အတနျးတှကေို ပွနျစီပေးတာလေ.." စုရှောငျလနျက ရှငျးပွသညျ။
"လူသဈက တဈသောငျးလောကျ ရှိတာကွောငျ့ ငါတို့ကို တနျးခှဲပေါငျး ၁၀၀ လောကျမှာ ခှဲစုစီပေးလိမျ့မယျ.. ကငျြ့ကွံခွငျးအခွခေံကို အမွငျ့ကနေ အနိမျ့ကို စီထားတာကွောငျ့ တနျးခှဲ ၁ ကနေ တနျးခှဲ ၁၀၀ အထိ အသီးသီးပေါ့.." စုရှောငျလနျက ဆကျပွောသညျ။
"ဘယျလိုတောငျ ရိုးရှငျးပွီး ကွမျးတမျးတဲ့ တနျးခှဲစနဈလဲ.." အနျလငျးက အံ့အားတကွီး ရရှေတျလိုကျသညျ။
"ကြောငျးသားရဲ့ စှမျးရညျပျေါမှာ မူတညျပွီး ဒီသငျကွားနညျးက ပိုထိရောကျလိမျ့မယျ.. အဲဒီအပွငျ နငျက ပါရမီရှငျ တဈယောကျနဲ့ တူတာကွောငျ့ အသာလေး တနျးခှဲ ၁ ကို ဝငျနိုငျတယျ.." စုရှောငျလနျက ခပျပါးပါးပွုံးလိုကျသညျ။
စုရှောငျလနျရဲ့ ပွောစကားက အနျလငျးကို ဆှံ့အသှားစသေညျ။ သူက တာအိုခန်ဓာဆိုတာတောငျ ဘာမှနျးမသိတာ တနျးခှဲ ၁၀၀ ကို ဝငျရောငျတောငျ ကံကောငျးလှနျးလို့ပဲ ဖွဈမညျ။
အနျလငျးနှငျ့ စုရှောငျလနျတို့က လူအုပျကို တိုးဝှဖွေ့တျသနျးပွီး နောကျတှငျတာ့ စာရငျးပေးသှငျးရမညျ့ နရောသို့ ရောကျရှိလာခဲ့သညျ။
စုရှောငျလနျက သူမ၏ အဖွူရောငျဝငျခှငျ့စာရှကျကို ထုတျပွီး သကျလတျပိုငျး လူကွီးကို ကမျးပေးလိုကျသညျ။ ထိုလူကွီး၏ ခါးတှငျတော့ အငျမျောတယျ ဓားတဈခြောငျး ခြိတျဆှဲထားသညျ။
ထို့နောကျ သူမက ဧရာမ ကြောကျနကျပွားဆီ လြှောကျသှားပွီး သူမရဲ့လကျကို တငျလိုကျသညျ။
ကြောကျတုံးမှနေ အဖွူရောငျအလငျးတနျးမြား ထုတျလှတျလာပွီး ကွီးမားသညျ့ စကားလုံးမြား ပျေါလာသညျ။ "တာအိုခန်ဓာ - အဆငျ့ ၉"
"ပါရမီရှငျဟေ့.. ငယျငယျလေးနဲ့ အဆငျ့ ၉ တာအိုခန်ဓာရောကျနပွေီ.." လူအုပျကွီးက အံ့အားတကွီး ရရှေတျကွသညျ။
ကြော့ရှငျးပွီး ရိုးရှငျးသညျ့ တာအိုဝတျစုံနှငျ့ မိနျးမလှလေးကို လူအားလုံးက အလှနျအံ့ဩတကွီး ကွညျ့လိုကျကွပွီး သူတို့၏ မကျြလုံးမြားတှငျ မနာလိုသညျ့ အရိပျအယောငျမြား ကပျငွိနသေေးသညျ။
"စုရှောငျလနျ တနျးခှဲ ၁.." အငျမျောတယျဓါး ခြိတျဆှဲထားသညျ့ သကျလတျပိုငျးလူကွီးက ကယျြလောငျစှာ ကွငွောလိုကျသညျ။
မြားပွားသညျ့ မကျြလုံးမြားအောကျမှာ စုရှောငျလနျက အနျလငျး၏ ဘေးတှငျ ရပျလိုကျပွီး "အနျလငျး.. အခုနငျ့အလှညျ့ပဲ.. မငျးကံကောငျးပါစေ............" စုရှောငျလနျက ပွုံးလိုကျသညျ။
အနျလငျးက အနညျးငယျ စိတျဖိစီးနပွေီး သကျလတျပိုငျး လူကွီးဆီ လြှောကျသှားကာ ရှစောရှကျအပိုငျးလေးကို ကမျးပေးလိုကျသညျ။
အနျလငျးဆီမှ ရှစောရှကျအပိုငျးလေးကို ယူပွီးသညျနှငျ့ သကျလတျပိုငျးလူကွီး၏ အကွညျ့သညျ စိတျမဝငျစားသညျ့ ပုံစံမှနေ အံ့အားသငျ့သညျ့ပုံသို့ တမဟုတျခငျြး ပွောငျးလဲသှားသညျ။
ရှစောရှကျကို အသကျဝငျလာစရေနျ အလငျြအမွနျပငျ သူ၏ မှျောစှမျးအငျကို အသုံးပွုလိုကျသညျနှငျ့ ယငျးမှနေ ရှရေောငျအလငျးမြား ထှကျပျေါလာသညျ။
သကျလတျပိုငျးလူကွီးက အနျလငျးကို ကွညျ့လိုကျပွီးနောကျ သူ့မကျြနှာတှငျ မမြှျောလငျ့ဘဲ ခပျဖြော့ဖြော့အပွုံးတဈခု ပျေါလာခဲ့သညျ။ "သှားလေ... သှားပွီး မငျးရဲ့ ကငျြ့ကွံခွငျး အခွခေံကို တိုငျးတာခြေ.." သူက နူးနူးညံ့ညံ့ပွောသညျ။
"အဲဒါ အစဈအမှနျ နတျဘုရားတဈပါးရဲ့ ထောကျခံစာကှ.." ရှစောရှကျကိုမွငျတော့ အမွငျစူးရှသညျ့ ကြောငျးသားတဈယောကျက အံ့ဩတကွီး အျောလိုကျသညျ။
ထိုသညျကို ကွားလိုကျရတော့ ကြောငျးသားအသဈအားလုံးမှာ စိတျလှုပျရှားလာကွသညျ။
"သူ့မှာ အစဈအမှနျ နတျဘုရားတဈပါးရဲ့ ထောကျခံစာကို ရလောကျတဲ့အထိ အရညျအခငျြးရှိနတောဆိုတော့ ဒီလိုမြိုး ပါရမီရှငျက ဘယျမြိုးနှယျက လာတယျဆိုတာ သိခငျြလိုကျတာ.."
"ဒါနဲ့.. အစဈအမှနျ နတျဘုရားရဲ့ ထောကျခံစာနဲ့ ရောကျလာတာ ငါတို့ လူသဈတှထေဲမှာဆို သူက သုံးယောကျမွောကျ မဟုတျဘူးလား.."
"အမှနျပဲပေါ့ကှာ.. အရငျကဆို တဈယောကျတောငျမှ ပါလာဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးကှ.. ရုတျတရကျဆိုသလို သုံးယောကျကွီးမြားတောငျ ဆိုတော့... ဒီလိုမြိုး တဈခါမှတောငျ မမြှျောလငျ့ထားဖူးပါဘူးကှာ..."
လူအုပျကွီးက ထိုအကွောငျးက စိတျပါလကျပါ ဆှေးနှေးနကွေပွီး လူအားလုံးနီးပါးက အနျလငျးကို စိတျအားထကျသနျစှာ ကွညျ့နကွေသညျ။
တခြို့ မိနျးမငယျလေးမြားမှာ အနျလငျး၏ ခြောမောသညျ့ ရုပျရညျသှငျပွငျကို မွငျရသညျ့အခါ ရှကျသှေးဖွာပွီး ခဈြမတ်ေတာမြားပငျ ပှငျ့ဖူးလာကွသညျ။
ငလူး... သူတို့အားလုံးက ငါ့ကိုဘာလို့ ကွညျ့နကွေတာတုနျး..။
မြားပွားလှသညျ့ အာရုံစိုကျမှုမြားကွောငျ့ အနျလငျးမှာ စိတျပူပငျသောက ရောကျလာရသညျ။
သူတို့အားလုံးက ဘာလို့ငါ့ကို မြှျောလငျ့ခကျြ ကွီးမားနရေတာတုနျး..။ အနျလငျးမှာ ဘေးကပျြနံကပျြ အခွအေနနှေငျ့ ရငျဆိုငျနရေသလိုပငျ။
စိတျထဲ ထညျ့မနတေော့ဘူး.. ငါက တာအိုခန်ဓာ အဆငျ့ ၁၀ တို့ ဘာတို့ ဖွဈခငျြ ဖွဈနနေိုငျတာပဲ။
ထိုသို့တှေးလို့ပွီးနောကျ အနျလငျးက သူ့ကိုယျသူ ပွနျလညျထိနျးခြုပျနိုငျသှားသညျ။
ဟုတျတယျ.. တကယျတမျး ငါကသောကျရမျးမိုကျနတောကို ငါကိုယျတိုငျ သတိမထားမိသေးတာပဲ ဖွဈရမယျ..။
အနျလငျးက ဧရာမ ကြောကျနကျပွားကွီးပျေါတှငျ သူ့လကျကို တငျလိုကျသညျ။ အဖွူရောငျအလငျးတှေ တောကျပလာပွီးနောကျ သူ့လကျတဈလြှောကျ တုနျခါလာသညျ။ သူ့စိတျတှေ လေးလံလာပွီး ထှကျပျေါလာမညျ့ ရလဒျကို မြှျောလငျ့နသေညျ။
ကွီးမားသညျ့ စာလုံးကွီးမြားက ဧရာမကြောကျနကျပွားကွီးပျေါတှငျ ပျေါလာခဲ့သညျ။ "တာအိုခန်ဓာ ဗလာအဆငျ့.."
လူအုပျကွီးက ခကျြခငျြးဆိုသလို တိတျဆိတျသှားပွီး လူအားလုံးက ကြောကျနကျပွားပျေါရှိ စာလုံးမြားကို ငေးကွညျ့နကွေသညျ။
တခြို့ဆို သူတို့မွငျလိုကျရသညျကို မယုံနိုငျသဖွငျ့ မကျြလုံးမြားကို လကျဖွငျ့ပှတျကာ ပွနျကွညျ့လိုကျသေးသညျ။
သူက စိတျထဲတှငျ ပွငျဆငျထားပမေဲ့လညျး ထှကျပျေါလာသညျ့ ရလဒျကွောငျ့ တဈခဏမြှ စကားမပွောနိုငျအောငျ ဆှံ့အသှားသညျ။
သို့ပမေဲ့လညျး အမှနျတရားက သူ့အရှသေို့ ရုတျတရကျကွီး ရောကျရှိလာသဖွငျ့ သူ့ကိုယျသူ စိတျပကျြနမေိသညျ။
အရာအားလုံးက ရုတျခညျြးဆိုသလို ကွောကျမကျဖှယျကောငျးအောငျ တိတျဆိတျသှားသညျ။
အနျလငျးက ကြောငျးသားအသဈမြားကို လိုကျကွညျ့လိုကျသညျ။ သူတို့သညျ သူ့ထကျပငျပိုပွီး အံ့အားသငျ့ကာ ဆှံ့ကွနသေညျကို တှလေို့ကျရသဖွငျ့ ပွောစရာစကားပငျ ဆှံ့အသှားသညျ။
"အနျလငျး တနျးခှဲ ၁.." သကျလတျပိုငျးလူကွီးက အျောပွောလိုကျသညျ။
အနျလငျးက ယိုငျတိယိုငျတိုငျဖွငျ့ လြှောကျသှားလိုကျသညျ။ သကျလတျပိုငျးလူကွီးနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရသညျ့ အခါတှငျ သူ့မကျြလုံးထဲတှငျ မယုံကွညျနိုငျသော အကွညျ့မြားက အတိုငျးသားပငျ။ သူက မှားယှငျးစှာ ကွားလိုကျရသညျဟုပငျ သံသယဖွဈမိသညျ။
ထို့နောကျ တခွားကြောငျးသားမြားဆီသို့ ကွညျ့လိုကျသညျ့အခါ သူတို့ကလညျးပဲ သူ့အား ဖျောပွလို့မရနိုငျအောငျ စိတျရှုပျထှေးသညျ့ အမူအယာမြားဖွငျ့ ကွညျ့နကွေသညျ။
အရာအားလုံးက နောကျတဈကွိမျ တိတျဆိတျသှားပွနျသညျ။
"နောကျခံတောငျ့ပွီး မရိုးဖွောငျ့တဲ့ ကြောငျးသားတဈယောကျကတော့ ဒီနှဈလူသဈတှထေဲ ပါလာခဲ့ပွီဟေ့.."
ထိုအခြိနျမှာပငျ လူအုပျထဲရှိ တဈယောကျက မှတျခကျြပွုသညျ။
တဈဦးတဈယောကျကမှ ပွနျလညျခပြေခွငျး မပွုဘဲ လူအမြားက သူတို့၏ခေါငျးမြားကို ညိတျကာ သဘောတူကွောငျး ပွနကွေသညျ။
အနျလငျး ဆိုသညျ့ အမညျမှာ စုစညျးညီညှတျ ကငျြ့ကွံခွငျးကြောငျးတျော တဈဝှမျး မကွာခငျမှာပငျ ပြံ့နှံ့သှားတော့မညျကို သူတို့က သဘောပေါကျနားလညျကွသညျ။
အားလုံးပွီးသညျ့နောကျတှငျတော့ အနျလငျးက အဆိုးရှားဆုံး ရလဒျနှငျ့ အကောငျးဆုံးတနျးခှဲသို့ ဝငျခှငျ့ရသညျ့ ပထမဆုံးကြောငျးသားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျသှားပွီ ဖွဈသညျ။
ထိုမှတျခကျြကို ကွားလိုကျရတော့ အနျလငျးမှာ မကျြနှာရှုံ့မဲ့မဲ့ပငျ ဖွဈလာသညျ။ ခေါငျးငိုကျစိုကျခကြာ စုရှောငျလနျ ရှိရာသို့ ပွနျသှားလိုကျသညျ။
စုရှောငျလနျ၏ မကျြလုံးမြားမှာ ကွငျနာမှုဖွငျ့ ပွညျ့နပွေီး သူက နှဈသိမျ့ဖို့ရာ ကွိုးစားလိုကျပမေဲ့ မညျကဲ့သို့ စပွောရမညျမှနျး မသိပေ။
အနျလငျးက ခေါငျးကို လေးဆယျ့ငါး ဒီဂရီ ထောငျလာခဲ့သညျ။ မကျြနှာတှငျ စိတျဓာတျကသြညျ့ အမူအယာဖွငျ့ ကောငျးကငျကို မော့ကွညျ့လိုကျသညျ။
သူက ငွိမျးခမျြးစှာ ကငျြ့ကွံလိုသညျသာ ဖွဈသညျ။ ဘာလို့မြား ကြောငျးတျောသို့ ဝငျဝငျခွငျး လူအားလုံး၏ အာရုံစိုကျစရာ ဖွဈလာခဲ့ရတာလဲ။
ထို့အပွငျ သူက လူအားလုံး မနှဈမွို့စှာ အာရုံစိုကျခံရသူတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့ခွငျးပေ။
အခန်း - ၂ နောက်ခံတောင့်ပြီး မရိုးဖြောင့်သည့် ကျောင်းသား
အန်လင်းက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေတုန်းမှာပင် စနစ်၏ နယ်ပယ်က သူ့စိတ်ထဲတွင် ရုတ်ချည်းပေါ်လာခဲ့သည်။ "လက်ခံသူက ထိုက်ချူကုန်းမြေကြီးသို့ ဝင်ရောက်ပြီးစီးကြောင်း ထောက်လှမ်းမိပါသည်။ ဘာသာစကားစနစ် စတင်ထည့်သွင်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။"
ထိုသည်ကို မြင်တော့ အန်လင်း၏ မျက်နှာတွင် ပျော်ရွှင်မှုတို့ သန်းလာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာသာစကား အတားအဆီးပြဿနာက ဖြေရှင်းပြီးတော့မှာပေါ့...။ သူက တွေးလိုက်သည်။
ခေတ္တကြာပြီးနောက် စနစ်က အခြားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု ပေးပို့လာသည်။ "ဘာသာစကားစနစ် ထည့်သွင်းခြင်း ကျရှုံးပါသည်။ လက်ခံသူက ခွေးလို နှစ်ကြိမ်ဟောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး အသံကျယ်လောင်မှု ၇၀ ဒက်ဆီဘယ်အောက် မနည်းရပါ။" (ဒက်ဆီဘယ်က အသံတိုင်းတာသည့် အခြေခံယူနစ် ဖြစ်ပါတယ်)
ဘယ်လိုသောက်အဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ ဘယ်သူကများ ပြောပြပေးနိုင်မလဲဗျာ...
ငါကဘာလို့များ ခွေးလိုဟောင်ဖို့ လိုအပ်ရတာတုန်း.. အဲလိုဟောင်လိုက်ရင် ဘာတွေများ ရလာမှာတဲ့လဲ..
အန်လင်းက သူ့စိတ်ထဲမှနေ မရပ်မနား ငိုကြွေးနေတော့သည်။ စနစ်ကတော့ သောက်ဖက်နည်းနည်းတောင် မလုပ်ပေ။
"ဝုတ်.. ဝုတ်.." အန်လင်းက တိတ်တဆိတ် ဟောင်လိုက်သည်။ သူ့မျက်နှာတွင် ရှက်ရွံ့မှုတို့က အတိုင်းသားပင်။
ထို့နောက် စနစ်က နောက်ထပ် မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခု ပို့လာပြန်သည်။ "လက်ခံသူ၏ အသံသည် ၂၀ ဒက်ဆီဘယ်သာ ရှိကြောင်း ထောက်လှမ်းမိပါသည်။ အသံအကျယ်မလုံလောက်သဖြင့် မှတ်တမ်းယူဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။"
မိန်းကလေးက အန်လင်းအား ထူးဆန်းသည့်အကြည့်နှင့် ကြည့်လာသည်။ အန်လင်းက အရမ်းကို ထူးဆန်းသည့် အသံတွေ ပြုလုပ်နေသည်ကို ကြားလိုက်မိသည်ဟု ခံစားနေရသည်။
မိန်းမလှလေးက အန်လင်းနားမလည်သည့် ဘာသာစကားနှင့် ပြောပြန်သည်။ သူမ၏ အကြည့်မှာလည်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပြောင်းလဲလာနေပြီ ဖြစ်သည်။
ဟုတ်သည်။ သူမက သူ့အား ဉာဏ်ရည်မမီသည့် သူတစ်ယောက်လို ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်။
အန်လင်းက ထပ်ပြီးတော့ သည်းမခံနိုင်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျယ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ်ဟောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ "ဝုတ်...... ဝုတ်......."
သူ့အသံက အရမ်းကျယ်သွားသည့်အတွက် အနီးအနားရှိ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူအများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပါ ရရှိလိုက်သည်။ ထိုသူများက တွေဝေသည့် အမူအရာများဖြင့် ကြည့်လာကြသည်။
အန်လင်းအရှေ့တွင် ရပ်နေသည့် မိန်းကလေးမှာလည်း ရုတ်တရက်ဆိုသလို ထိတ်လန့်သွားသည်။
"နင်က ရူးနေတာလား.." မိန်းကလေးက အော်လိုက်သည်။
ဟ.. ငါမျှော်လင့်ထားသလိုပဲ အရူးလို့ အခေါ်ခံလိုက်ရတာပါလား... အန်လင်းက ခါးသက်သက်နှင့် ရယ်မောလိုက်သည်။
"ခဏလေး... နင်ပြောတာ ငါနားလည်နိုင်ပြီပေါ့..."
အန်လင်းက အသိစိတ်ပြန်ဝင်လာပြီး ထူးခြားသည့် ဘာသာစကားတစ်ခုက သူ့နှုတ်ခမ်းမှနေ အလိုအလျောက် ထွက်လာခဲ့သည်။
မိန်းကလေးက ပါးစပ်ကို လက်ဖြင့်အုပ်လိုက်ပြီး တခစ်ခစ်ရယ်လိုက်သည်။ "အာ... နင်က လူစကားပြောနိုင်တယ်ပေါ့.. အခုနက နင်ရုတ်တရက်ကြီး ဟောင်နေတာဆိုတော့ နင်က ခွေးမိစ္ဆာ အသွင်ပြောင်းထားတာလို့ ထင်မိတော့မလို့ပဲ.."
အန်လင်းရဲ့ မျက်နှာက ရဲတက်လာတာကြောင့် အလျင်အမြန်ပင် ခေါင်းစဉ်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည်။ "အမ်... မင်္ဂလာပါ.. ငါ့နာမည်က အန်လင်း.. ဒီကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်လာတာပဲ.. ဒီနေရာအကြောင်းလေးများ ပြောပြပေးနိုင်မလား.."
ထိုမိန်းကလေးက အနည်းငယ် အံ့ဩသွားပြီး "ဒီနေရာအကြောင်း မသိဘဲနဲ့ နင်ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ.."
"တကယ်တော့ အရမ်းအစွမ်းထက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ငါ့ကို တည်နေရာ ရွှေ့ပြောင်းပေးလိုက်တာ.. ဒီနေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါက ဘာမှ မသိဘူးရယ်.."
"အိုး.. အဲလိုမျိုးလား.. အဲဒီ ကုန်းမြေက ကောင်းကင်ဘုံပိုင်နက်လေ.." မိန်းကလေးက ဝင်ပေါက်အနောက်မှရှိတဲ့ နန်းတော်များကို ညွှန်ပြရင်း ရှင်းပြသည်။ "အဲဒီ ဝင်ပေါက်တွေအတွင်းက ပိုင်နက်က စုစည်းညီညွတ် ကျင့်ကြံခြင်းကျောင်းတော်ရဲ့ ကျောင်းဝင်းလေ.. နင်ကလည်း ကျောင်းသားအသစ်ပဲလို့ ငါထင်တယ်.."
"ဝိုး.... နင်ပြောသလိုဆို အဲဒီ ဝင်ပေါက်အနောက်က အရမ်းကျယ်ဝန်းတဲ့ နေရာကြီးက ကျောင်းတော်ရဲ့ ကျောင်းဝင်းပေါ့ ဟုတ်လား..." အန်လင်းက အရမ်းအံ့ဩသည့် လေသံနှင့် ပြောသည်။
သူက အဝေးရှိ မရေမတွက်နိုင်အောင် ပြန့်ကျဲနေသည့် အဆောက်အဦများကို ကြည့်လိုက်သည်။ ထိုအဆောက်အဦများက ကျယ်ဝန်းသည့် နေရာတစ်ခုလုံးတွင် အဆုံးမသတ်နိုင်အောင် ရှိနေသည်။
"အံ့ဩစရာပဲ မဟုတ်လား.. ဒါနဲ့ နင်က ဒီကို ဘာလာလုပ်တာလဲ.." မိန်းကလေးက စပ်စပ်စုစု မေးလာသည်။
"တကယ်တော့ အခုနက နင်ခန့်မှန်းလိုက်တာ မှန်တယ်ဟ.. ငါက ကျောင်းသားအသစ်တစ်ယောက်ပဲ.." သူကပြောနေရင်း ရွှေစာရွက်လေးကို ကမ်းပေးလိုက်သည်။
"အစစ်အမှန် နတ်ဘုရားတစ်ပါးရဲ့ ထောက်ခံစာ...!" မိန်းကလေးက အာမေဋိတ်သံပြုလိုက်သည်။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ အန်လင်းအပေါ် အမြင်အသစ်တစ်မျိုးနှင့် ကြည့်လိုက်သည်။
မိန်းကလေးက ချစ်စဖွယ်အပြုံးလေးနှင့် အန်လင်းအား မိတ်ဆက်လာသည်။ "မင်္ဂလာပါ.. ငါက ကျောက်နဂါး ပြည်နယ်ကလာတဲ့ စုရှောင်လန် ပါ.. ငါလည်းပဲ ကျောင်းသူအသစ်ပါ.."
"နင်က ဒီနေရာနဲ့ မရင်းနှီးဘူးဆိုတော့ ငါက နာမည်စာရင်းသွင်းဖို့ ကူညီပေးမယ်.."
စုရှောင်လန်က အန်လင်းရဲ့ အဖြေကိုတောင် မစောင့်တော့ဘဲ သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး ကျောင်းတော်ဝင်ပေါက်ဆီသို့ ဆွဲခေါ်သွားသည်။
အန်လင်းက အရမ်းကို ပျော်ရွှင်သွားသည်။ ဒီမိန်းမလှလေးက ရုတ်တရက်ကြီး ဘာလို့ သဘောတွေ ကောင်းလာရတာတုန်း..။
"ဒီ စုစည်းညီညွတ် ကျင့်ကြံခြင်းကျောင်းတော်ကို ကောင်းကင်ဘုံပိုင်နက်က အထောက်အပံ့ပေးထားတာပဲ.. ပြီးတော့ ကိုးပြည်ထောင်မှာဆိုရင် စုစည်းညီညွတ် ကျောင်းတော်က ထိပ်တန်းအဆင့် ကျင့်ကြံခြင်းကျောင်းတော် ပဲလေ.. ကျောင်းတော်တစ်ခုလုံးက စတုရန်းကီလိုမီတာ လေးသောင်းလောက် ကျယ်တယ်.." စုရှောင်လန်လမ်းလျှောက်နေရင်း အန်လင်းကို ကျောင်းတော်အကြောင်း ပြောလာသည်။
အန်လင်း၏ အမူအရာမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု အပြည့်နှင့် ဖြစ်သည်။ ကျောင်းတော်၏ ပိုင်နက်ကပင် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးထက် ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေသေးသည်။
ကျောင်းတော်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် တမူထူးခြားသည့် နတ်ဗိမာန်များ ထက်ပိုပြီး သူ့အား အံ့အားသင့်စေသည့် အရာမှာ လမ်းပေါ်တွင် မြင်တွေ့နေရသည့် လူ များသာ ဖြစ်သည်။
သူတို့ဝတ်ဆင်ထားသည့် အဝတ်အစားမျိုးစုံသာမက သူတို့၏ အသားအရောင်များမှာလည်း အရောင်အသွေးစုံလှသည်။ အန်လင်းဘေးမှ ဖြတ်သွားသည့် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုလျှင် ဦးခေါင်းတွင် ဦးမှင်နှင့် နောက်ကျောတွင် ခရုခွံ ရှိနေသည်ကိုပါ မြင်လိုက်ရသေးသည်။
သူတို့နှင့် ယှဉ်ကြည့်ပါက စုရှောင်လန်၏ တာအိုဝတ်စုံနှင့် သွင်ပြင်မှာ အရိုးရှင်းဆုံးပင် ဖြစ်မည်။
တချို့ကျောင်းသားများ၏ ဟိုဟိုဒီဒီ သွားလာနေကြသည့် ပုံစံမှာ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှသည်။ တစ်ချို့က လေဟုန်စီးနေကြပြီး တချို့မှာတော့ သူတို့၏ မှော်ရတနာများကို အသုံးပြုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပျံသန်းနေကြသည်။ ထိုနည်းလမ်းအားလုံးမှာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာပင်။
သို့ပေမဲ့လည်း အဲဒီလူတစ်ယောက်က လေဆင်နှာမောင်းပေါ် ဘာထိုင်လုပ်နေတာတုန်း။
ခင်ဗျားက လေဆင်နှာမောင်းအပေါ် ထိုင်နေတာကို ထားပါဦးဗျာ.. ဒါပေမဲ့ ဘာလို့များ လေနဲ့အတူ လိုက်လည်နေရတာတုန်း...။
ထိုသည်ကို မြင်တော့ အန်လင်းက မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ကျယ်လောင်စွာ အော်ရယ်မိတော့သည်။
ထိုသည်ကို မြင်တော့ လေဆင်နှာမောင်းပေါ်တွင် ထိုင်နေသည့်သူမှာ အတော်လေး ဒေါသထွက်သွားပြီး သူ့အား ရယ်နေသည့် အန်လင်းကို ဘုကြည့်ကြည့်လာသည်။
လေဆင်နှာမောင်းအဆင့်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တိုင်းတွင် ထိုကဲသို့ လည်နေမည် ဖြစ်သဖြင့် အန်လင်းက ထိုအကြံကို ကြံ့ကြံ့ခံရမည် ဖြစ်သည်ကြောင့် ထိုလူက အဝေးသို့ ရောက်မသွားမချင်း ထပ်မံပြီး မရယ်ရဲတော့ပေ။
စုရှောင်လင်က လူစုစု ရှိနေသည့် နေရာတစ်ခုကို ညွှန်ပြလိုက်ပြီး "စာရင်းသွင်းရမယ့် နေရာက အဲမှာပဲ.."
ထိုသည်က မြေကွက်လပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူထောင်ပေါင်းများစွာက ကြည့်ရှုနေကြသည်။
ဧရာမ ကျောက်နက်ပြားတစ်ချပ်က လူအုပ်အကြားတွင် ရှိနေပြီး အဖြူရောင်အလင်းတန်းများ ထုတ်လွှတ်ပေးနေသည်။
တာအိုခန္ဓာ - အဆင့် ၇
အန်လင်း၏ မျက်နှာမှာ မှောင်မိုက်လာသည်။ ဒီလို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုမျိုးကို ရင်းနှီးနေသည်ဟု ဘာလို့ ခံစားမိနေတာလဲ။
"ဒါက စာရင်းမသွင်းခင် ကျင့်ကြံခြင်း အခြေခံကို စစ်ဆေးတာလေ.. ငါတို့က ကျောင်းလက်ခံတဲ့ အသိပေးစာကို ရထားပြီးသားပေမဲ့ ငါတို့ရဲ့ ကျင့်ကြံခြင်း အခြေခံအလိုက် တက်ရမယ့်အတန်းတွေကို ပြန်စီပေးတာလေ.." စုရှောင်လန်က ရှင်းပြသည်။
"လူသစ်က တစ်သောင်းလောက် ရှိတာကြောင့် ငါတို့ကို တန်းခွဲပေါင်း ၁၀၀ လောက်မှာ ခွဲစုစီပေးလိမ့်မယ်.. ကျင့်ကြံခြင်းအခြေခံကို အမြင့်ကနေ အနိမ့်ကို စီထားတာကြောင့် တန်းခွဲ ၁ ကနေ တန်းခွဲ ၁၀၀ အထိ အသီးသီးပေါ့.." စုရှောင်လန်က ဆက်ပြောသည်။
"ဘယ်လိုတောင် ရိုးရှင်းပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ တန်းခွဲစနစ်လဲ.." အန်လင်းက အံ့အားတကြီး ရေရွတ်လိုက်သည်။
"ကျောင်းသားရဲ့ စွမ်းရည်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဒီသင်ကြားနည်းက ပိုထိရောက်လိမ့်မယ်.. အဲဒီအပြင် နင်က ပါရမီရှင် တစ်ယောက်နဲ့ တူတာကြောင့် အသာလေး တန်းခွဲ ၁ ကို ဝင်နိုင်တယ်.." စုရှောင်လန်က ခပ်ပါးပါးပြုံးလိုက်သည်။
စုရှောင်လန်ရဲ့ ပြောစကားက အန်လင်းကို ဆွံ့အသွားစေသည်။ သူက တာအိုခန္ဓာဆိုတာတောင် ဘာမှန်းမသိတာ တန်းခွဲ ၁၀၀ ကို ဝင်ရောင်တောင် ကံကောင်းလွန်းလို့ပဲ ဖြစ်မည်။
အန်လင်းနှင့် စုရှောင်လန်တို့က လူအုပ်ကို တိုးဝှေ့ဖြတ်သန်းပြီး နောက်တွင်တာ့ စာရင်းပေးသွင်းရမည့် နေရာသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
စုရှောင်လန်က သူမ၏ အဖြူရောင်ဝင်ခွင့်စာရွက်ကို ထုတ်ပြီး သက်လတ်ပိုင်း လူကြီးကို ကမ်းပေးလိုက်သည်။ ထိုလူကြီး၏ ခါးတွင်တော့ အင်မော်တယ် ဓားတစ်ချောင်း ချိတ်ဆွဲထားသည်။
ထို့နောက် သူမက ဧရာမ ကျောက်နက်ပြားဆီ လျှောက်သွားပြီး သူမရဲ့လက်ကို တင်လိုက်သည်။
ကျောက်တုံးမှနေ အဖြူရောင်အလင်းတန်းများ ထုတ်လွှတ်လာပြီး ကြီးမားသည့် စကားလုံးများ ပေါ်လာသည်။ "တာအိုခန္ဓာ - အဆင့် ၉"
"ပါရမီရှင်ဟေ့.. ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အဆင့် ၉ တာအိုခန္ဓာရောက်နေပြီ.." လူအုပ်ကြီးက အံ့အားတကြီး ရေရွတ်ကြသည်။
ကျော့ရှင်းပြီး ရိုးရှင်းသည့် တာအိုဝတ်စုံနှင့် မိန်းမလှလေးကို လူအားလုံးက အလွန်အံ့ဩတကြီး ကြည့်လိုက်ကြပြီး သူတို့၏ မျက်လုံးများတွင် မနာလိုသည့် အရိပ်အယောင်များ ကပ်ငြိနေသေးသည်။
"စုရှောင်လန် တန်းခွဲ ၁.." အင်မော်တယ်ဓါး ချိတ်ဆွဲထားသည့် သက်လတ်ပိုင်းလူကြီးက ကျယ်လောင်စွာ ကြေငြာလိုက်သည်။
များပြားသည့် မျက်လုံးများအောက်မှာ စုရှောင်လန်က အန်လင်း၏ ဘေးတွင် ရပ်လိုက်ပြီး "အန်လင်း.. အခုနင့်အလှည့်ပဲ.. မင်းကံကောင်းပါစေ............" စုရှောင်လန်က ပြုံးလိုက်သည်။
အန်လင်းက အနည်းငယ် စိတ်ဖိစီးနေပြီး သက်လတ်ပိုင်း လူကြီးဆီ လျှောက်သွားကာ ရွှေစာရွက်အပိုင်းလေးကို ကမ်းပေးလိုက်သည်။
အန်လင်းဆီမှ ရွှေစာရွက်အပိုင်းလေးကို ယူပြီးသည်နှင့် သက်လတ်ပိုင်းလူကြီး၏ အကြည့်သည် စိတ်မဝင်စားသည့် ပုံစံမှနေ အံ့အားသင့်သည့်ပုံသို့ တမဟုတ်ချင်း ပြောင်းလဲသွားသည်။
ရွှေစာရွက်ကို အသက်ဝင်လာစေရန် အလျင်အမြန်ပင် သူ၏ မှော်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် ယင်းမှနေ ရွှေရောင်အလင်းများ ထွက်ပေါ်လာသည်။
သက်လတ်ပိုင်းလူကြီးက အန်လင်းကို ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် သူ့မျက်နှာတွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ခပ်ဖျော့ဖျော့အပြုံးတစ်ခု ပေါ်လာခဲ့သည်။ "သွားလေ... သွားပြီး မင်းရဲ့ ကျင့်ကြံခြင်း အခြေခံကို တိုင်းတာချေ.." သူက နူးနူးညံ့ညံ့ပြောသည်။
"အဲဒါ အစစ်အမှန် နတ်ဘုရားတစ်ပါးရဲ့ ထောက်ခံစာကွ.." ရွှေစာရွက်ကိုမြင်တော့ အမြင်စူးရှသည့် ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အံ့ဩတကြီး အော်လိုက်သည်။
ထိုသည်ကို ကြားလိုက်ရတော့ ကျောင်းသားအသစ်အားလုံးမှာ စိတ်လှုပ်ရှားလာကြသည်။
"သူ့မှာ အစစ်အမှန် နတ်ဘုရားတစ်ပါးရဲ့ ထောက်ခံစာကို ရလောက်တဲ့အထိ အရည်အချင်းရှိနေတာဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး ပါရမီရှင်က ဘယ်မျိုးနွယ်က လာတယ်ဆိုတာ သိချင်လိုက်တာ.."
"ဒါနဲ့.. အစစ်အမှန် နတ်ဘုရားရဲ့ ထောက်ခံစာနဲ့ ရောက်လာတာ ငါတို့ လူသစ်တွေထဲမှာဆို သူက သုံးယောက်မြောက် မဟုတ်ဘူးလား.."
"အမှန်ပဲပေါ့ကွာ.. အရင်ကဆို တစ်ယောက်တောင်မှ ပါလာဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးကွ.. ရုတ်တရက်ဆိုသလို သုံးယောက်ကြီးများတောင် ဆိုတော့... ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှတောင် မမျှော်လင့်ထားဖူးပါဘူးကွာ..."
လူအုပ်ကြီးက ထိုအကြောင်းက စိတ်ပါလက်ပါ ဆွေးနွေးနေကြပြီး လူအားလုံးနီးပါးက အန်လင်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ကြည့်နေကြသည်။
တချို့ မိန်းမငယ်လေးများမှာ အန်လင်း၏ ချောမောသည့် ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို မြင်ရသည့်အခါ ရှက်သွေးဖြာပြီး ချစ်မေတ္တာများပင် ပွင့်ဖူးလာကြသည်။
ငလူး... သူတို့အားလုံးက ငါ့ကိုဘာလို့ ကြည့်နေကြတာတုန်း..။
များပြားလှသည့် အာရုံစိုက်မှုများကြောင့် အန်လင်းမှာ စိတ်ပူပင်သောက ရောက်လာရသည်။
သူတို့အားလုံးက ဘာလို့ငါ့ကို မျှော်လင့်ချက် ကြီးမားနေရတာတုန်း..။ အန်လင်းမှာ ဘေးကျပ်နံကျပ် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသလိုပင်။
စိတ်ထဲ ထည့်မနေတော့ဘူး.. ငါက တာအိုခန္ဓာ အဆင့် ၁၀ တို့ ဘာတို့ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေနိုင်တာပဲ။
ထိုသို့တွေးလို့ပြီးနောက် အန်လင်းက သူ့ကိုယ်သူ ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်သွားသည်။
ဟုတ်တယ်.. တကယ်တမ်း ငါကသောက်ရမ်းမိုက်နေတာကို ငါကိုယ်တိုင် သတိမထားမိသေးတာပဲ ဖြစ်ရမယ်..။
အန်လင်းက ဧရာမ ကျောက်နက်ပြားကြီးပေါ်တွင် သူ့လက်ကို တင်လိုက်သည်။ အဖြူရောင်အလင်းတွေ တောက်ပလာပြီးနောက် သူ့လက်တစ်လျှောက် တုန်ခါလာသည်။ သူ့စိတ်တွေ လေးလံလာပြီး ထွက်ပေါ်လာမည့် ရလဒ်ကို မျှော်လင့်နေသည်။
ကြီးမားသည့် စာလုံးကြီးများက ဧရာမကျောက်နက်ပြားကြီးပေါ်တွင် ပေါ်လာခဲ့သည်။ "တာအိုခန္ဓာ ဗလာအဆင့်.."
လူအုပ်ကြီးက ချက်ချင်းဆိုသလို တိတ်ဆိတ်သွားပြီး လူအားလုံးက ကျောက်နက်ပြားပေါ်ရှိ စာလုံးများကို ငေးကြည့်နေကြသည်။
တချို့ဆို သူတို့မြင်လိုက်ရသည်ကို မယုံနိုင်သဖြင့် မျက်လုံးများကို လက်ဖြင့်ပွတ်ကာ ပြန်ကြည့်လိုက်သေးသည်။
သူက စိတ်ထဲတွင် ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့လည်း ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်ကြောင့် တစ်ခဏမျှ စကားမပြောနိုင်အောင် ဆွံ့အသွားသည်။
သို့ပေမဲ့လည်း အမှန်တရားက သူ့အရှေ့သို့ ရုတ်တရက်ကြီး ရောက်ရှိလာသဖြင့် သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ပျက်နေမိသည်။
အရာအားလုံးက ရုတ်ချည်းဆိုသလို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင် တိတ်ဆိတ်သွားသည်။
အန်လင်းက ကျောင်းသားအသစ်များကို လိုက်ကြည့်လိုက်သည်။ သူတို့သည် သူ့ထက်ပင်ပိုပြီး အံ့အားသင့်ကာ ဆွံ့ကြနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ပြောစရာစကားပင် ဆွံ့အသွားသည်။
"အန်လင်း တန်းခွဲ ၁.." သက်လတ်ပိုင်းလူကြီးက အော်ပြောလိုက်သည်။
အန်လင်းက ယိုင်တိယိုင်တိုင်ဖြင့် လျှောက်သွားလိုက်သည်။ သက်လတ်ပိုင်းလူကြီးနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ရသည့် အခါတွင် သူ့မျက်လုံးထဲတွင် မယုံကြည်နိုင်သော အကြည့်များက အတိုင်းသားပင်။ သူက မှားယွင်းစွာ ကြားလိုက်ရသည်ဟုပင် သံသယဖြစ်မိသည်။
ထို့နောက် တခြားကျောင်းသားများဆီသို့ ကြည့်လိုက်သည့်အခါ သူတို့ကလည်းပဲ သူ့အား ဖော်ပြလို့မရနိုင်အောင် စိတ်ရှုပ်ထွေးသည့် အမူအယာများဖြင့် ကြည့်နေကြသည်။
အရာအားလုံးက နောက်တစ်ကြိမ် တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်။
"နောက်ခံတောင့်ပြီး မရိုးဖြောင့်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကတော့ ဒီနှစ်လူသစ်တွေထဲ ပါလာခဲ့ပြီဟေ့.."
ထိုအချိန်မှာပင် လူအုပ်ထဲရှိ တစ်ယောက်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ပြန်လည်ချေပခြင်း မပြုဘဲ လူအများက သူတို့၏ခေါင်းများကို ညိတ်ကာ သဘောတူကြောင်း ပြနေကြသည်။
အန်လင်း ဆိုသည့် အမည်မှာ စုစည်းညီညွတ် ကျင့်ကြံခြင်းကျောင်းတော် တစ်ဝှမ်း မကြာခင်မှာပင် ပျံ့နှံ့သွားတော့မည်ကို သူတို့က သဘောပေါက်နားလည်ကြသည်။
အားလုံးပြီးသည့်နောက်တွင်တော့ အန်လင်းက အဆိုးရွားဆုံး ရလဒ်နှင့် အကောင်းဆုံးတန်းခွဲသို့ ဝင်ခွင့်ရသည့် ပထမဆုံးကျောင်းသားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုမှတ်ချက်ကို ကြားလိုက်ရတော့ အန်လင်းမှာ မျက်နှာရှုံ့မဲ့မဲ့ပင် ဖြစ်လာသည်။ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချကာ စုရှောင်လန် ရှိရာသို့ ပြန်သွားလိုက်သည်။
စုရှောင်လန်၏ မျက်လုံးများမှာ ကြင်နာမှုဖြင့် ပြည့်နေပြီး သူက နှစ်သိမ့်ဖို့ရာ ကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့ မည်ကဲ့သို့ စပြောရမည်မှန်း မသိပေ။
အန်လင်းက ခေါင်းကို လေးဆယ့်ငါး ဒီဂရီ ထောင်လာခဲ့သည်။ မျက်နှာတွင် စိတ်ဓာတ်ကျသည့် အမူအယာဖြင့် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။
သူက ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျင့်ကြံလိုသည်သာ ဖြစ်သည်။ ဘာလို့များ ကျောင်းတော်သို့ ဝင်ဝင်ခြင်း လူအားလုံး၏ အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်လာခဲ့ရတာလဲ။
ထို့အပြင် သူက လူအားလုံး မနှစ်မြို့စွာ အာရုံစိုက်ခံရသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းပေ။